Gulf Jobs ee dadka indhaha ah oo taban iyo wanaagsan ee ka shaqeynaya dibadda
Gulf Jobs ee Indiya
Qurbejoog Dubai - Shaqo ka raadso Bariga Dhexe
Tilmaamaha Shaqooyinka Cryptocurrency ee fursadaha Daryeelaha BlockChain
Published by Shirkadda Dubai City at February 18, 2018
Shaqooyinka beeraha waayo, Hindida Noqo mowduuc caan ah oo ku jira UAE ganacsi. Xaalad aad tahay Indian. Iyo raadinta shaqo uga helo wadamada khaliijka. Xaqiiqdii, waa inaad aqriso maqaalkeena. Aan kuu soo bandhigno meheraddayada. Waxaan nahay shirkada shaqaaleynta yaa ah ka caawinta xirfadlayaasha caalamiga ah ee shaqo doonka inay shaqo ka helaan Emirates iyo wadamada Khaliijka. Dhinaca kale, waxaan inta badan ka caawinnaa ka shaqeeyayaasha ka soo jeeda Hindiya.
Sidaas awgeed haddii aad ku filan tahay. Waxaan awoodnaa inaan kaa caawino sidii loo meeleyn lahaa. Gaar ahaan dalalka Gacanka. Dawladaha Carbeed ee Gacanka Ciraaq. Ma toddobada dowladood ee carabta ah. Ilaa iyo hadda waxaan ku dhajinaynaa murashaxiinta Hindiya ee 75k. Inta badan Kuwaitta Kuwait wadanka carabta Emirates sidoo kale Qatar iyo Saudi Arabia. Shaqooyinka Khaliijka ee Hindida Qurbaha kooxdayada ayaa kaa caawin doonta inaad taas sameyso.
Dhinaca wanaagsan ee dowladaha carbeed ee Gacanka Faaris. Waxaad ka heli kartaa shaqo-bixiyeyaal tiro yar oo shaqaaleysiinaya iftiinka tooska ah. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah shirkadaha Batroolka. Shirkadaha noocan oo kale ah ayaa aad loo jecel yahay. Gaar ahaan shaqaalaha dhalashada Hindida. Laakiin intaanaan hore u socon. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato natiijada xun. Tusaale ahaan, Shaqaalaha wadayaasha ee Hindiya kuwaas oo dhab ahaantii ah shaqeynta Gacanka wajaheysa khataraha. Waxaa jira shaqaale ka badan 7 shaqaalaha maraakiibta Gulf.
Gacanka hab nololeedka iyo xirfadda
Hindida iyo qaab nololeedka Gacanka. Tan iyo markii Hindiya ay bilaabeen u guurista wadamada carabta ee Penisula. Waxay noqdaan dad qaran oo maxalli ah. The carruurtu waxay ku koreen dhaqanka Carabiga. Dhanka kale. Markaad u guurto Qatar tusaale ahaan. Ka dib ku dhawaad ​​sannadaha 10 waxaad noqon doontaa Qatar. Fikirkaaga ayaa isbedelaya. Sababta oo ah waxaad ku heli doontaa waddo aad u iftiimaya mustaqbalkaaga. Waqtiga inbadan Shaqooyinka waxaa laga heli doonaa Dubai iyo Abu Dhabi. Iyo qaar badan oo kale oo wanaagsan ayaa kor u kaca.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican noloshaada GCC. Waa mid aad u fudud waddamada carabta ee Penisula waxay ku siineysaa dhowr ikhtiyaar oo nolosha caafimaad leh oo farxad leh cimri dheer. Nidaamka tacliinta sare ee Khaliijka runti wuu ku caawinayaa bilow xirfad cusub Bariga Dhexe. Xitaa boos ka fiican goobtaada shaqada. Waad si fudud u beddeli kartaa shaqada inta aad da’yar tahay. Waxaas oo dhami mar bay yimaadaan. Ku siinaya a Fursadda xirfadeed ee koritaanka shaqsiyadeed.
Waxaa jira shaqaale badan oo qorista wakaaladaha u soo guuray Hindiya si Dubai. Dabcan, Bariga Dhexe si dhakhso ah ayey u noqotaa. Mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee lagu helo boosaska mushaharka badan leh. Xitaa sida ugu fiican ee suurtogalka ah Shirkado xafiis ku leh Dubai, Doha, Kuwa Kuweyt Kuweyt. Shaqooyinka Khaliijka ee Hindida ayaa suurogal ka ah shirkaddeena.
Dawladda Gacanka iyo shaqada
Intooda badan Hindiya waxay bixisaa. Si aad u wanaagsan ayaan u yaqaannaa Maxay u eg tahay in laga shaqeyo mid ka mid ah waddamada Khaliijka. Waxaad ka heli kartaa shaqaale Hindi ah oo tayo sare leh gudaha Dubai iyo Dooxa. Tan iyo markii shaqo doonka caalamiga ahi ay yimaadeen wadamada GCC. Xeerarkan cusub ayaa la adeegsaday oo lagu beddelay hab-dhaqankii caadiga ahaa ee Islaamka. Meelaha aad loo jecel yahay ee khaliijka Khaliijka ayaa ah shaqooyinka Dubai ee fursadaha baabuurta.
Qaab dhismeedka dowladda ayaa jira heerka sare ee awooda dalka. Nolol tayo sare leh iyo musharrax tartan leh. Iyo dabcan shuruudaha shaqo ee ugu wanaagsan ee mid kastoo ka mid ah Jaamacadda Carabta ee Penisula. Soo jiidashada badan dadka ajaanibta ah ee soo galaya magaalada Dubai oo halkaas ku qiimeeyeen. Sidaas darteed waxaa jira bulsho xooggan oo ka jirta wadamada GCC. Waxay wada shaqeynayaan si ay uga caawiyaan dadka kale inay gudaha u soo baxaan.
Dhanka kale, shaqaalaha India kama duwana kuwa kale. The shaqaalaysiiyaya maamulayaasha inta badan dib-u-soosaarista Aasiya oo meeleeyay Bariga Dhexe. Waxay yihiin maamuleyaal aqoon iyo cilmi bartay. Shirkadaha Dubai ee maamusha shaqada iyo shaqo raadinta UAE suuq toos ah. Dalalka Khaliijka ayaa isku dayaya inay taageeraan shirkad kasta oo cusub oo qaadaya mas'uuliyadda kireysiga caalamiga ah ee shaqaalaha.
Hindida gacanka ee gacan ku siinta dibadda
Waxaa jira in kabadan 7 milyan oo Hindi ah. Taasi hadda kana shaqeeya wadamada khaliijka. Ama shirkad aruurisa CV-yada oo intaas dhaafsiisan intaas. Waqtigan xaadirka ah waxaan shaqaaleysiinayno oo keliya ma aha qurbejoogta Indan. Laakiin sidoo kale Pakistani, Iyo sidoo kale Shaqaalaha Philipino ee Dubai. iyo Koonfur Afrika. Sida xaqiiqda dhabta ah, waxaanu haynaa macluumaad weyn. Iyo saldhiggaas.
Inbadan oo kamid ah booqdayaashayada qaasatan Aasiya. Helay shaqo bixin oo ka socda hoteel iyo warshadaha iibka. Duruufahaas oo kale, tirada iyaga ayaa horeyba ugu dhaqaaqdey a fursadda shaqo ee suuqyada Dubai. Dhammaantood waxay adeegsadeen adeegyadayada shaqaalaynta ee Dubai. Gulf Jobs oo u dhalatay Hindiya waxaanu gacan siinaynaa.
Waa maxay isku midka ah in laga shaqeeyo wadamada Khaliijka?
Dhanka kale, meelwalba waa isku mid meel kastoo aad u guurto. Laakiin sidey uga shaqeysaa Khaliijka?. Daacadnimo, muuqaalku waa lamid yahay wadamada kale ee qodobbadayada inteena kale. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo kobciyo loona iibiyo naftaada loo shaqeeyaha ee Dubai tusaale ahaan. Qof kasta oo cusub oo u soo guuri doona GCC. Waa inay raadsadaan jidkooda si ay ugu sii gudbaan shaqo hel.
Su'aalaha waxaa ka jawaabi kara oo keliya qof yaqaan suuqa. Kumaa leh khibradda xirfadeed? Gaar ahaan taasi waxaa uga jawaabi kara mid ka mid ah xarumaha wicitaanka ee loogu yeero waddamada Khaliijka. Tusaale ahaan, waxaa jira Hindi badan. Waxay leeyihiin shaqo aad u wanaagsan ?. Iyo xaqiijinta raadinta joogitaanka iyo ka shaqeynta Khaliijka. Laakiin shaqo-doone kasta wuxuu u baahan yahay inuu ogaado sida loo shaqaaleysiiyo. Waa maxay xarumaha shaqada ugu fiican ee UAE?. Sida loo qoro internetka. Iyo meesha aan u diro faahfaahintayda.
Wadamada Khaliijka ee Hindida ah ayaa si ballaaran loo furay shaqaale caalami ah. Waxaa sidoo kale jira dhowr shaqooyinka raadinta bulshooyinka waa inaad ku soo biirtaa aaladahayada. Tani waa mid ka mid ah siyaabaha shaqooyinka. Taasna waa inaad bilowdaa inaad ka fikirto inaad u guurto hab nololeedka cusub. Tusaale ahaan, waxaad arki kartaa muxuu yahay dalal ajanabi ah ee ku nool India?.
Waxaad si fudud uga heli kartaa qodobo kale oo yar. Ku saabsan shaqooyinka wanaagsan iyo Emirates. Laakiin weligaa ma ogaan doontid ilaa aad naftaada ka gaadho meesha loo doortay in lagu noolaado. Shaqooyinka Khaliijka ee Hindida ayaa ah super caan ka ah Imaaraadka.
Gulf Jobs oo u dhalatay Hindiya
Shaqooyinka Gulf oo ah goob shaqo oo wanaagsan
Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, kooxdeena waxay jeclaan lahaayeen inay kuu dhigaan GGC. Faahfaahin yar oo ku saabsan shaqooyinka Khaliijka ee Hindida aad u baahan tahay inaad ogaato. Mid ka mid ah waxyaabaha ay tahay inaad xasuusato ka hor intaanan horay u socon. Markaad ka shaqeyso Gacanka. Waxaad kasban kartaa lacag aad uga badan dalkaaga hooyo. Waa xaqiiqo inaad naftaada iska hubin karto annaga Hagaha loogu talo galay shaqo doonka khaliijka. Tusaale ahaan, waxaad ku dhufan kartaa mushaharkaaga. Is barbardhig shirkadaha Hindiya. Lambarradani si weyn ayay u korayaan oo isu beddelaan.
Tusaale ahaan kooxaha shaqada ee dabaqadda dhexe. Waxaad ka heli kartaa sheekooyin badan oo wanaagsan. Gaar ahaan Hindida oo iyagu ah jidkoodii guusha. Waxaa la yaaban waxaa jira sheekooyin dhowr ah Bariga Dhexe. Tusaale ahaan sida ay saraakiishii Hindiya ugu soo guureen Dubai. Sababta ay u leeyihiin doortay xirfad xirfadeed ee Sacuudi Carabiya.
Sababo badan ayaa jira. Waa maxay sababta ay tahay inaad dooro inaad ka shaqeyso Khaliijka. Halkii ka shaqeynta Yurub ama Mareykanka. Mid ka mid ah tusaalooyinka sida aad si xirfad leh ugu horumarin karto meheraddaada. Waa horumar shakhsi ahaaneed gudaha. Tan iyo markii aad gaadhay heer maamul. Mid ka mid ah dhinacyada xiiseynaya oo aad u wanaagsan waa Shaqaalaha Koonfur Afrika ee Dubai. Markaad ugu dambeyntii u dhaqaaqdo Bariga Dhexe. Markaa waxaad heli doontaa aqoonyahanno badan oo caalami ah oo shaqeeya. Aad bay u fiican tahay in lala hadlo shaqaalaha kale ee adduunka. Waxaad heli doontaa dheeraad ah khibrad qiimo leh.
Bilaabidda xirfadaha Gulf sida Hindiya
Waxaad awood u yeelan doontaa inaad maamusho miisaaniyadda. Ku filan in la helo raasamaal oo imminka bilow bilowgaaga. Waxaa jira, dabcan, wakhtiyo adag marka aad guureyso. Markii aad u guurto mid ka mid ah waddamada Khaliijka. Tusaalayaal aad u wanaagsan oo sida loo kici karo looguna iftiimiyo waa Bariga Dhexe. Tusaale ahaan, caankaas Dubai waa meesha ugu fiican ee dunida loogu talagalay fursado shaqo. Markaa waxaad u baahan tahay inaad doorato si aad u caqli badan. Maxay tahay bartilmaameedkaaga, iyo cidda aad jeclaan lahayd inaad noqotid?
Aynu isbarbar dhigno qiimaha nolosha ee inta badan waddamada khaliijka. Meelaha Hindiya la joogo tusaale ahaan. Aad u baahan tahay inaad Ku kharash garee lacag aad u badan magaalooyinka waaweyn ee Hindiya. Dhanka kale, tirooyinku waxay ku daraan maxaa yeelay canshuur malaha wixii aad shaqaysato. Sidoo kale, dhinacyo aad u wanaagsan waa khibradaada. Tusaale saamaynta wanaagsan ee waayo-aragnimada shaqo ee Gobolka Carabta ee Penisula.
Gaar ahaan markaad rabto inaad dibadda u guurto oo aad ka shaqeyso Dubai. Waa mid aad u qiimo badan mustaqbalka. Markaad gaarto ku dhawaad ​​40 sano. Raadinta shaqadu waxay noqon kartaa hawl socod marin ah. Laakiin oo leh khibrad xirfadeed iyadoo mid ka mid ah waddamada sida Qatar ama Sacuudiga. Guud ahaan marka laga hadlayo, waxay badbaadin kartaa shaqadaada adag.
Ka shaqeynta wadamada GCC
Fikrad kale oo wanaagsan ayaa ah helitaanka xirfad bangi ah iyo u wareejinta lacagta Hindiya. Intii aan ka shaqeynayay GCC. Markaad ka shaqeyso UAE. Uma baahnid sharciga. Inuu bixiyo wixii canshuur ah. Markaa intaadan lacag bixin waa inaad keydisaa. Lacag dibedda loogu diro akoonnada bangiga India. Heshiiska wuu sahlan yahay kiiskan. Sare xirmooyinka mushaharka ee Gacanka. Lacagta badan ee aad sameyn karto. Dhinaca wanaagsan ha kuu ogolaato inaad lacag badan kaydiso.
Si loo soo gabagabeeyo Shaqooyinka India ee Imaaraadka Carabta iyo GCC. Sanadihii ugu horreeyay ee aad ka shaqeysay GCC. Laga yaabee inay adag tahay oo aadan arki doonin qiima badan. Laakiin wax walba waqti ayey ku qaadatay in laqabsado Waxaad ka heli kartaa nin Hindi ah Mushaharka ayaa aad uga fiicnaa in la barbar dhigo qiimaha nolosha. Intaa waxaa sii dheer, qiimaha nolosha ayaa aad uga fiicnaa. Laakiin in yar sug. Qaado xoogaa khibrad fiican leh. Sare u qaad heerkaaga xirfadeed.
Ka dib marka aad khibradaada kasbato. Gudaha shirkad si xoogan looga yaqaan magaalada. Mustaqbalka fog, waad garan doontaa. In aad leedahay dheelitirka bangiga dheelitiran oo aad u badan. Adiguna miisaaniyaddii wey kortay. Xitaa aad uga sarreeyn lahayd India. Dhanka kale, hadaad tahay xiiso badan oo ku saabsan Aagga Magaalada Dubai. Waad ka hubin kartaa ama si fudud jawaabo uga heli kartaa Google ama Facebook.
Diyaarinta wareysiga Gulf
Macluumaad kale oo xiiso leh waa wareysiga shaqo ee Bariga Dhexe. Waxaad u baahan tahay inaad si dhab ah u ogaatid waxa la sameeyo. Dhab ahaantii, wareysi laga qaaday wadamada Gulf. Ma u egtahay ciidan waxaad leedahay hal tallaal oo aad qaadato. Waxaad u baahan tahay inaad u diyaargarowdo dareen kasta oo ereygan ah.
Xitaa helitaanka a Wareysiga socodka gudaha Dubai. Ma fududa in la helo. Qaybo ka mid ah dhinacyada aysan ku jiri doonin meel adiga. Tusaale ahaan, Waxaad u baahan tahay inaad ogaato qawaaniinta ka jirta adduunka xirfadda carabiga. Xitaa gudaha Hindiya, waxaad u baahan tahay inaad ahaato diyaarisay socod ku saabsan wareysiga shaqada ee Dubai. Waxaad ubaahantahay inaad u muuqato mid fiiqan. Dhankaas, waxaad ubaahantahay inaad si caqli badan uhadasho inuu u ekaado qofka aragga leh. Dhanka wanaagsanna waa waqtigaaga inaad naftaada ku hormariso shaqaaleysiinta. Waa daqiiqaddaada 30 ee caannimada.
Gulf Jobs oo u dhashay Hindiya ayaa ku tartamaya UAE.
Wadamada Khaliijka ee u tartamaya
Qof kasta oo shaqo doon ah kuma duceysan doono inuu u helo shaqooyinka Khaliijka Hindida. Qaar ka mid ah kharashyada caalamiga ah ayaa laga yaabaa inaysan helin fursado shaqo. Kahor intaadan u guurin GCC waa in la xasuusto inaad qatar ku jirto. Aynu dul dhigno qiimo. In ka badan 40% muhaajiriinta ka soo jeeda India ee ku laabanaya waddankoodii. Runtii dagaal adag ayaa ka jira boos kasta oo ka jira UAE. Intaa waxaa dheer, dadku sidoo kale waxay shaqo ka raadsanayaan Qatar iyo Saudi Arabia. Wadamada kale ayaan laheyn caankaas. Gaar ahaan marka shaqaalaha Hindida ay dalbadaan loo shaqeeyayaasha halkaas.
Sanadaha soo socda Shirkaddayadu waxay aragtay isbeddello isa soo taraya. Mid ka mid ah meelaha xiiseynaya dib u dejinta waa Kuwait. Dalkan shaqaalaha dhalashada Hindia. Guud ahaan marka laga hadlayo, si diiran ayaa loo soo dhaweynayaa. Qeybta IT-ga iyo qeybta dhaqaalaha ayaa ku soo badanaya Kuwait. Markaa hadaad tahay haysashada waxbarashada MBA. Tani waxay si dhab ah kuu meeleyneysaa. Dhinaca kale, xaaladaha shaqada ee Kuwait waa kuwa ugu muhiimsan dadka shaqo doonka ah ee Indiya.
Gabagabadii shaqooyinka Khaliijka ee Hindida. Wadankee ayaa kuugu habboon adiga. Runtii waxay kuxirantahay khibradaada iyo aqoontaada. Imaaraadku wuxuu u noqday No1 Hindida. Intaa kadib Qatar. Laakiin dhinaca taban ee Qadar. Loo shaqeeyeyaasha badankood waxay soo bandhigaan keliya qandaraas shaqo. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah Shirkadaha Dubai ee ka shaqeynaya Koobka Adduunka 2022 ee Qatar. Inta badan fursadaha qandaraaska ee ka yimaada milkiilayaasha ganacsiga Qatari. Wuxuu yimaadaa oo kaliya sida shaqooyinka qandaraaska ah. Laakiin dhanka kale, waa waajibaad aad uwanaagsan.
Gacanka haweeneyda uurka leh
Waa in aan xusuusanno haweeney u tartantay. The Haweeney shaqeeya Gacanka Wadamada waxay noqdeen wax caadi ah. Hadda xitaa gudaha Saudi Arabia haweeneyda wey wadi kartaa. Mid ka mid ah waddamada ugu wanaagsan loogu talagalay dumarka qurbaha ah waa United Arab Emirates. Tusaale ahaan Dubai iyo dumarka Abu Dhabi ee India ka socda oo maamula shirkad weyn.
Iyadoo taas maskaxda lagu hayo xitaa hadaad u guurto Dubai ama Abu Dhabi. Xaaskaaga waad ku casuumi kartaa. Oo waxay ka caawisaa sidii ay shaqo ku heli lahayd. Magaalada Dubai, waxaa ku yaal goobo shaqo oo dhowr ah. Haweenayda dhergaysa si fudud ayey u raadsan kartaa shaqooyinka riyada. Waxa kale oo jira koritaanka Taariikhda Magaalada Dubai hage si aad u eegto. Xaqiiqdii waa inaad fiirisaa fursadaha shaqo ee haweenka.
Waxaa jira waddamo badan oo furan. Halka haweenku ay ka heli karaan xirfad. Mid ka mid ah kuwa ugu fiican waddanka dibedda ku shaqeynaya ee haweenka qurbaha ku nool Dubai. Cilmi baaristayada qorista. Waxaan kugula talineynaa dumar dumar ah oo howlgab ah. In aad eegto wadamada sida Baxrayn iyo Cumaan. Haddii aad waayo-aragnimo fiican leedahay daqiiqad kadib waxaad heli doontaa warqad shaqo. Xitaa meeshii ugu sahlan oo laga bilaabo shaqo dibedda.
Shaqaalaha caalamiga ah ee Gacanka
Inta badan dadka shaqo doonka ah. Hubinta qiyaasta maalin walba Shaqooyinka Dubai ee ardayda ka qalin-jabisay Hindiya. Sababtoo ah shaqooyinka banaan ee shisheeyaha ayaa ah kuwa ugu wanaagsan GCC. Laakiin aan ka hor tagno, dad badan ayaa noqday oo kaliya shaqaale caadi ka ah suuqa shaqada. Iyagu ma raadinayaan ee nolol wanaagsan. Qaarkood waxay is dhiibaan bilowga. Maxay taasi u dhacaysaa ?. Maxaa yeelay nolosha waa adag tahay. Mana jiro hab sahlan oo loo maro horumarka. Mustaqbalka fog ee helitaanka waxa muwaadin kasta oo maxalli ah uu maamulay. The Shaqaalaha caalamiga ah ee khaliijka waxay u shaqeeyaan si adag. Ma jiro hab sahlan oo guusha loo gaaro.
Wixii raadin iyo shaqeynaya dibedda Dubai. Waxaad ubaahantahay inaad lahaato geesinimo. Tallaabo kasta oo aad qaadatid waxay leedahay natiijo u gaar ah. Noqo qof qurbo-joog qurxoon maahan hawl fudud. Tagitaanka iyo ku noolaashada wadan kale sidoo kale waa go'aan adag in la qaato. Markaa ka fikir laba jeer ka hor intaadan go'aan gaarin. La hadal dadka kale ee ku nool Sacuudiga ama Kuweyt. Qaado qaar fikradda xitaa tilmaamahayaasheena. Safka hore, runti waa mudan tahay in dibedda laga shaqeeyo. laakiin go'aanka adiga ayaa iska leh.
Mid ka mid ah siyaabaha sahlan ee lagu bilaabi karo mustaqbalkiisa dibadda waa u shaqeeya sidii macallin Dubai ah. Waa shaqo mushahar fiican leh, kana soo horjeedda shaqooyinka heerka shaqada ee Imaraadka. Qaar ka mid ah shaqooyinka shaqada ayaa la imaan kara markii aad bilowdo inaad ku noolaato dibedda. Xaaladaha badidoodna, way kuu shaqeyn doontaa mustaqbalka fog. Shaqooyinka Khaliijka ee Hindida ayaa kuu furan.
Xirfadaha Gulf oo ah mid aan fiicnayn
Ma jiraan dhibco badan oo taban. Wadamada Khaliijka guud ahaan waa ay ka hadlaan diiran qaadashada kharashyada. Tusaale ahaan Sacuudiga iyo Imaaraadka. Intooda badani waa meel aad u horumarsan. Markaa hadaadan ahayn nooc qof raadinaya qaab nololeedka magaalada. Waddamada carabta ee Penisula-ka dhab ahaan maahan adiga. Waxyaabaha yar ee taban ee sidoo kale gundhigga ka jira waa inaad u baahan tahay ogolaansho aad ku shaqeyso. Waxaad ubaahantahay inaad lahaato hage faahfaahsan oo gacanta ah sida loo helo shaqo ku saabsan booqashada fiisada Bariga Dhexe.
Waa inaan sidoo kale ku xasuusnaano markan kaliya maahan inay fuliyaan howl wadeenada India. Helitaanka shaqo Gacanka. Waxa kale oo jira ummad kale kuwaasoo shaqo ka raadinaya GCC. Tusaalooyinka mid ka mid ah waa Bakistaan. Tan iyo markii aagga dhaqaalaha Khaliijka uu albaab u furay dadka shaqo doonka ah. Imaaraadka Carabta ee Imaaraadka Carabta ayaa bilaabay inay kiraystaan ​​dadka u dhashay Pakistan. Marka xitaa haddii aad go'aansato inaad u guurto mid ka mid ah dhulalka riyooyinka ee shaqo doonka. Waxaad wajihi doontaa inaad u baahan tahay inaad u diyaar garowdo inaadan ahayn qofka keliya. Gaar ahaan Magaalada Dubai.
Shaqooyinka Hotel ee Gulf Jobs ee Indiya
Waxaa jira wargeysyada xanta lagu baahiyo. Gaar ahaan dadka Hindida ah ee ka shaqeeya hoteelada Emirates. Xitaa waad ka hubin kartaa boos Dubai City. Isla goobta, waxaad ku arki kartaa si faahfaahsan sida maamulka Indian ay u soo dhoweynayaan dadka Carabiga. Mawduuca ugu weyn, waxaan u baahanahay inaan nidhaahno. Ugu fiican fursado shaqo oo loogu talagalay xirfadda hotel ee Dubai. Had iyo jeer waa kan koowaad. Xirfadaha iyo wadamada khaliijka. Inta badan dadka ajaanibta ah ee ka fikiraya shaqooyinka hoteellada ee Dubai. Ama doorashada xigta waxay noqon kartaa Abu Dhabi. Kuwa ugu caansan ayaa Qatar ah Saudi Arabia oo leh Kuwait dhamaadka. Marka waa inaad xusuusataa ku saabsan shaqooyinka Khaliijka ee Hindida. Shaqada hudheelka dhab ahaantii adiga ayaa kuu joogi doona.
Hotelka Burj Al-Carab ayaa istaagay xeebta Dubai oo ku taal jasiirad caan ah oo loo yaqaan 'jun-yada', gaar ahaan tan, waa hudheelka ugu quruxda badan aduunka.
Taageerada dowladda ee shaqaalaha India
Tirada dhowaan soo baxday ayaa ka soo baxday wakiilada dawladda Hindiya. Iyo muujinta Maamulayaasha Bariga Dhexe. Helitaanka mushaharka wanaagsan. Waxaa intaa dheer, waxaa jira in ka badan 10% kobcinta maareynta maaraynta maaraynta maaraynta. Iyadoo aan loo eegin Gulf ayaa ka soo jeeda Hindiya. Waxay hadda helayaan jagooyin maareyn hoggaamiye sare. Sidookale, dowlada India waxay balanqaadeysaa isbadal loogu tala galay dadka shaqo doonka ah. Waxay hadda rajeynayaan inay ka baaraandegaan arrin kasta oo Hindida ka shaqeeya dibadda ee Dubai wajahay xirfadda mihnadeed.
Xitaa yaab leh xitaa Dawladda Imaaraadka Carabtu waxay ku jirtaa isbeddelada qaar. Taas macneheedu maaha inaad horay u aragto. Sidaa daraadeed, Boqor Sacuudiinka iyo Qatar ayaa u tegi doona si ay uga caawiyaan bedelida geedi socodka shaqaalaynta Shaqaaleynta WhatsApp. Gaar ahaan shaqo doonka Hindida. Dhammaantood waxay ka wada shaqeynayaan sidii loo wanaajin lahaa xaaladaha shaqada ee Hindiya ee waddamada khaliijka. Sidoo kale taliyihii Dubai. Hadal buu siiyay gaar ahaan shaqaalaha ka yimid India.
Gabagabaynta nolosha Gacanka
Shaqooyinka Khaliijka ee loogu talagalay shaqaalaha Hindida. Ka guurista waddan kale oona u guuraya mid kale. Markaad gaadho wadamada Bariga Dhexe. Shaki kuma jiro inaad ka heli doonto waayo-aragnimo badan. Xitaa dhisidda soo saarista CV-gaaga. Dhab ahaan, ku siiya qancin badan. Gaar ahaan haddii aad shaqo raadinayso oo aadan ka soo helin nooca qaniga ah ee qoyska. Dabcan, haddii aad ku guurto waa inaad ku dhufatid bartamaha ama heerka maareynta. Iyadoo waayo aragnimadaas, waxaad samayn doontaa kordhi fursadaha shaqooyinkaaga.
Dhinaca kale, haddii aad tahay arday cusub oo qalin jabiya. Gaar ahaan waxbarashada dugsiga MBA. Waxaad ka bilaabi kartaa fasalka shaqada. Kadibna raadinta shaqooyin ka fiican Dubai. Dhinaca xun ee xaaladdan. Nasiib darrose, lacagta ayaa laga yaabaa inaysan ahayn waxaad filaysay. Laakiin waa inaad meel uun ka bilowdo. Xilli dambe, waad kasban kartaa wax ka badan waxa aad shaqeyso maamulayaasha shaqada halkan kaalay Laakiin waa inaad samir muujisaa. Ku dadaal maalin kasta adoo wata himilo muuqda oo mustaqbalka ah.
Caawinta Gulf Jobs ee Indiya
Waxaan hadda caawinaynaa Hindida si aad shaqo u hesho Gacanka
Isku day inaad dib u dirto resume iyo bilaabi a cusub Xirfadda UAE!
Resume Resume ilaa gobolka ugu dhaqsaha badan - Shirkadda Dubai City